HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mixe Mongol Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
‘Torio amin’ny fomba feno ny vaovao tsara ny amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra.’—ASA. 20:24.
HIRA: 101, 84
Tokony handrisika antsika hanao inona ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jehovah?
Nahoana ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana” no manasongadina ny hatsaram-panahin’i Jehovah?
Inona no hataon’i Jehovah ao amin’ny tontolo vaovao, noho ny hatsaram-panahiny?
1, 2. Ahoana no nampisehoan’i Paoly fa nankasitraka ny hatsaram-panahin’i Jehovah izy?
AFAKA nilaza ny apostoly Paoly hoe ‘tsy very maina ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa nasehon’Andriamanitra taminy.’ (Vakio ny 1 Korintianina 15:9, 10.) Tena namindra fo taminy Andriamanitra, nefa tsapany tsara fa tsy mendrika an’izany izy satria nanenjika ny Kristianina taloha.
2 Nanoratra ho an’i Timoty i Paoly talohan’ny nahafatesany hoe “velom-pisaorana an’i Kristy Jesosy Tompontsika” izy. “Nanome hery” azy mantsy i Jesosy sady nihevitra azy ho mendri-pitokisana ka nanendry azy “hanao fanompoana.” (1 Tim. 1:12-14) Nolazainy tamin’ny anti-panahin’ny fiangonana tao Efesosy hoe inona io fanompoana io. Hoy izy: ‘Tsy heveriko ho zava-dehibe ny aiko, toy ny hoe sarobidy amiko, raha mba azoko atao ihany ny hamita ny fihazakazahako sy ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo, dia ny hitory amin’ny fomba feno ny vaovao tsara ny amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra.’—Asa. 20:24.
3. Inona no fanompoana manokana nasaina nataon’i Paoly? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
3 Inona ilay “vaovao tsara” notorin’i Paoly, ary nahoana izy io no nanasongadina ny hatsaram-panahin’i Jehovah? Hoy izy tamin’ny Kristianina tao Efesosy: ‘Efa renareo fa nasain’Andriamanitra niandraikitra ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa aho, mba hahasoa anareo.’ (Efes. 3:1, 2) Nirahina hitory ny vaovao tsara tamin’ny tsy Jiosy i Paoly, mba ho afaka hiara-manjaka amin’ny Mesia koa izy ireo. (Vakio ny Efesianina 3:5-8.) Nazoto nitory izy ka modely ho an’ny Kristianina ankehitriny. Nasehony tamin’izany fa “tsy very maina” ny hatsaram-panahy nasehon’Andriamanitra taminy.
MANDRISIKA ANAO HITORY VE NY HATSARAM-PANAHIN’I JEHOVAH?
4, 5. Nahoana isika no afaka milaza fa ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana” ihany ilay hoe vaovao tsara ny amin’ny “hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra”?
4 Nirahina hitory ny ‘vaovao tsaran’ilay fanjakana maneran-tany’ ny vahoakan’i Jehovah, amin’izao andro farany izao, mba “ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra.” (Mat. 24:14) “Vaovao tsara ny amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra” koa io vaovao tsara io. Vokatr’io hatsaram-panahy io daholo mantsy ny fitahiana ho azontsika rehefa hitondra ilay Fanjakana. (Efes. 1:3) Mankasitraka ny hatsaram-panahin’i Jehovah toa an’i Paoly àry ve isika, ka mazoto mitory?—Vakio ny Romanina 1:14-16.
5 Hitantsika tao amin’ny lahatsoratra teo aloha hoe mandray soa be dia be isika na dia mpanota aza, noho ny hatsaram-panahin’i Jehovah. Mila manao izay fara herintsika àry isika mba hampahafantarana amin’ny olona hoe ahoana no anehoan’i Jehovah ny fitiavany, ary inona no tokony hatao mba handraisana soa amin’izany. Inona avy, ohatra, no azontsika resahina mba ho tsapan’ny olona fa tena tsara fanahy i Jehovah?
RESAHO AMIN’NY OLONA NY SOROM-PANAVOTANA
6, 7. Nahoana isika no azo lazaina hoe mitory momba ny hatsaram-panahin’i Jehovah rehefa manazava momba ny sorom-panavotana?
6 Tsy mampaninona ny olona maro intsony ny manota, ka tsy tsapany hoe mila fanavotana izy. Mihabetsaka koa anefa no mahatsapa hoe tsy mahasambatra izany. Maro no tsy nahalala ny atao hoe ota sy ny vokatr’izy io, raha tsy niresaka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy fantany koa ny tokony hatao mba tsy handevozin’izy io. Faly ny olona tso-po rehefa mahalala hoe nirahin’i Jehovah ho etỳ an-tany ny Zanany mba hanafaka antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana. Nanao an’izany izy noho ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa sy ny fitiavany.—1 Jaona 4:9, 10.
7 Hoy i Paoly momba an’ilay Zanaka malalan’i Jehovah: “Izy io no ananantsika ilay fanafahana entin’ny vidim-panavotana amin’ny alalan’ny rany, eny, ahazoantsika ny famelana ny helotsika, araka ny harenan’ny hatsaram-panahiny [Jehovah] tsy manam-paharoa.” (Efes. 1:7) Ny sorom-panavotan’i Kristy no porofo lehibe indrindra fa tia antsika i Jehovah sady tsara fanahy amintsika. Tena faly isika mahalala hoe ho voavela ny helotsika ary hadio ny eritreritsika, raha maneho finoana ny soron’i Jesosy isika. (Heb. 9:14) Tena tokony horesahina amin’ny olona izany vaovao tsara izany!
AMPIO HIFANDRAY AMIN’I JEHOVAH NY OLONA
8. Nahoana ny olombelona no mila ampihavanina amin’Andriamanitra?
8 Andraikitsika ny mampahafantatra hoe afaka ny ho naman’ny Mpamorona ny olona. Fahavalony mantsy isika raha tsy maneho finoana ny soron’i Jesosy. Hoy ny apostoly Jaona: “Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy.” (Jaona 3:36) Soa ihany fa afaka mihavana aminy isika, noho ny soron’i Kristy. Hoy i Paoly: ‘Lavitra an’Andriamanitra ianareo taloha sady fahavalony, satria nifantoka tamin’ny asa ratsy ny sainareo. Nampihavanin’Andriamanitra taminy indray anefa ianareo izao, tamin’ny alalan’ny vatana ara-nofo nananan’izy io, tamin’ny nahafatesany.’—Kol. 1:21, 22.
9, 10. a) Inona no andraikitra nankinin’i Kristy tamin’ny voahosotra? b) Inona no ataon’ny “ondry hafa” mba hanampiana ny voahosotra?
9 Nomen’i Kristy “fanompoana fampihavanana” ny rahalahiny voahosotra eto an-tany. Hoy i Paoly: “Avy amin’Andriamanitra ny zava-drehetra, ary nampihavaniny taminy tamin’ny alalan’i Kristy izahay, ka nomeny fanompoana fampihavanana, dia ny hanambara fa nampihavanin’Andriamanitra taminy tamin’ny alalan’i Kristy izao tontolo izao, ka tsy nisainy ny helok’izy ireo. Ary nankininy taminay ny teny fampihavanana. Koa ambasadaoro solon’i Kristy àry izahay, toy ny hoe miangavy amin’ny alalanay Andriamanitra. Solon’i Kristy izahay ka miangavy hoe: ‘Mba mihavàna amin’Andriamanitra re ianareo e!’”—2 Kor. 5:18-20.
10 Faly koa ny “ondry hafa” manampy an’ireo voahosotra. (Jaona 10:16) Toy ny irak’i Kristy izy ireo, ka manampy ny olona hahalala ny marina sy hifandray amin’i Jehovah. Izy ireo no mandray anjara betsaka indrindra amin’io asa io. Mitory amin’ny fomba feno ny vaovao tsara ny amin’ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra izy ireo amin’izany.
AMPAHAFANTARO HOE MPIHAINO VAVAKA ANDRIAMANITRA
11, 12. Nahoana no vaovao tsara ny hoe azontsika atao ny mivavaka amin’i Jehovah?
11 Maro no mivavaka satria te ho maivamaivana fotsiny. Tsy tena mino izy ireo hoe mihaino vavaka Andriamanitra. Tokony hampianarina azy ireo àry hoe “Mpihaino vavaka” izy. Hoy i Davida mpanao salamo: “Ry Mpihaino vavaka ô, ianao no hohatonin’ny karazan’olona rehetra. Tototry ny fahadisoana aho. Ary ny helokay, dia ianao no hamela azy.”—Sal. 65:2, 3.
12 Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Na inona na inona angatahinareo amin’ny Ray, dia homeny anareo amin’ny anarako izany.” (Jaona 16:23) Midika izany hoe azo angatahina amin’i Jehovah daholo izay zavatra mifanaraka amin’ny sitrapony. Nilaza i Jaona hoe: “Izao no toky ananantsika ny amin’Andriamanitra: Na inona na inona angatahintsika ka mifanaraka amin’ny sitrapony, dia mihaino antsika izy.” (1 Jaona 5:14) Tena faly isika mampianatra ny olona hoe tsy natao hampitony ny saina fotsiny ny vavaka, fa fomba hanatonana “ny seza fiandrianan’ny hatsaram-panahy” tsy manam-paharoan’i Jehovah. (Heb. 4:16) Ampianarintsika azy hoe ahoana no hatao rehefa mivavaka, iza no tokony hivavahana, ary inona no horesahina. Hanampy azy izany mba hifandray amin’i Jehovah sy hahazo fampaherezana rehefa misy olana.—Sal. 4:1; 145:18.
REHEFA AO AMIN’NY TONTOLO VAOVAO
13, 14. a) Inona no tombontsoa miavaka ho azon’ny voahosotra? b) Inona no hataon’ny voahosotra ho an’ny olombelona?
13 Mbola haneho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa i Jehovah, na dia aorian’ny faran’ity tontolo ity aza. Homeny tombontsoa miavaka, ohatra, ireo 144000 hiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra. Hoy i Paoly: “Manankarena famindram-po Andriamanitra, ary noho ny fitiavany lehibe izay nitiavany antsika no namelomany antsika niaraka tamin’i Kristy, na dia fony mbola maty tao amin’ny helotsika aza isika. Hatsaram-panahy tsy manam-paharoa no namonjena anareo. Ary niara-natsangany sy niara-napetrany teo amin’ny toerana tanantsika any amin’ny faritry ny lanitra isika, noho isika tafaray amin’i Kristy Jesosy. Nanao izany izy mba hampisehoana fa tsy misy toa azy ny harenan’ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa, amin’ny fotoana hisian’ireo rafitra ho avy, noho izy tsara fanahy amintsika izay tafaray amin’i Kristy Jesosy.”—Efes. 2:4-7.
14 Tsy ho takatry ny saintsika ny zavatra mahatalanjona homanin’i Jehovah ho an’ny voahosotra, rehefa hiara-manjaka amin’i Kristy izy ireo. (Lioka 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1 Jaona 3:2) Izy ireo no tena hampisehoany “fa tsy misy toa azy ny harenan’ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa.” Ho anisan’i “Jerosalema Vaovao” izy ireo, izany hoe ho vadin’i Kristy. (Apok. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Hiaraka amin’i Jesosy ‘hanasitrana ny firenena’ izy ireo. Amin’ny fomba ahoana? Hampian’izy ireo ny olona mankatò mba ho afaka amin’ny ota sy ny fahafatesana ary ho lavorary.—Vakio ny Apokalypsy 22:1, 2, 17.
15, 16. Ahoana no hanehoan’i Jehovah hatsaram-panahy amin’ny “ondry hafa”, amin’ny hoavy?
15 Milaza ny Efesianina 2:7 fa haneho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa Andriamanitra “amin’ny fotoana hisian’ireo rafitra ho avy.” Amin’izay fotoana izay ny olona eto an-tany no hahita “ny harenan’ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa.” (Lioka 18:29, 30) Hatsangan’i Jehovah ny olona ao “amin’ny Fasana.” (Joba 14:13-15; Jaona 5:28, 29) Anisan’ny fomba lehibe indrindra anehoany ny hatsaram-panahiny amin’ny olona eto an-tany izany. Iza avy no hatsangany amin’ny maty? Ireo lehilahy sy vehivavy tsy nivadika nefa maty talohan’ny nahafatesan’i Jesosy, ary ny “ondry hafa” tsy mivadika maty mandritra ny andro farany. Ho afaka hanompo azy indray izy ireo.
16 Hatsangana koa ireo olona maro be efa maty nefa tsy nahalala an’Andriamanitra. Havela hisafidy izy ireo hoe hanohana ny zon’i Jehovah hitondra sa tsia. Hoy i Jaona: “Hitako ny maty, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan’ny seza fiandrianana, dia nisy horonam-boky novelarina. Fa nisy horonam-boky iray koa novelarina, dia ny horonam-bokin’ny fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao amin’ireo horonam-boky, araka izay nataon’izy ireo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny Fasana namoaka ny maty tao aminy, ka samy notsaraina araka izay nataony avy izy ireny.” (Apok. 20:12, 13) Tsy maintsy hianatra hampihatra ny toro lalan’i Jehovah ao amin’ny Baiboly izy ireny, sady hampihatra ny toromarika vaovao ao amin’ireo “horonam-boky.” Ho hita amin’ireo toromarika vaovao ireo koa fa tena tsara fanahy i Jehovah.
TORIO FOANA NY VAOVAO TSARA
17. Inona no mila tadidintsika rehefa mitory?
17 Efa akaiky ny farany, ka vao mainka isika mila mitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana. (Mar. 13:10) Mila mitadidy isika hoe manasongadina ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jehovah ny vaovao tsara. Ny hanome voninahitra azy no tanjontsika rehefa mitory. Manao an’izany isika rehefa resahintsika amin’ny olona hoe vokatry ny hatsaram-panahin’i Jehovah ny fitahiana rehetra ho azontsika ao amin’ny tontolo vaovao.
Mazotoa mitory, dia ho “mpanompo tsara miandraikitra ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra” ianao.—1 Pet. 4:10 (Fehintsoratra 17-19)
18, 19. Inona no hataontsika raha tena sarobidy amintsika ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jehovah?
18 Azontsika hazavaina amin’ny olona hoe rehefa hitondra ny tany i Jesosy, dia handray soa amin’ny fomba feno amin’ny vidim-panavotana ny olombelona ary ho lavorary tsikelikely. Hoy ny Romanina 8:21: “Ny zavaboary koa dia hafahana amin’ny fanandevozan’ny fahalovana, ka hanana ny fahafahana be voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra.” Tsy ho tanteraka izany raha tsy naneho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa i Jehovah.
19 Azontsika iresahana an’ity fampanantenana mahafinaritra ity koa izay vonona hihaino: “Hofafany [Andriamanitra] ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.” Hoy i Jehovah, ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: “Ataoko vaovao ny zava-drehetra. ... Soraty fa azo antoka sady marina ireo teny ireo.” (Apok. 21:4, 5) Asehontsika àry hoe tena sarobidy amintsika ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’i Jehovah, rehefa mazoto mitory an’io vaovao tsara io isika.